तरकारी–फलफूलको विषादी प्रकरणः गगन थापाले भने– 'प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईंको राष्ट्रवाद देखियो, घुँडामा कत्रो भ्वाङ छ?' - सुनाखरी न्युज
Posted on: July 7, 2019 - 3:31 pm
भारतबाट आउने तरकारी–फलफूलको विषादी परीक्षण रोक्ने सरकारको निर्णयको संसदमा चर्को आलोचना भएको छ । प्रतिनिधि सभाको आइतवार विशेष समयमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद गगनकुमार थापले सरकारले विषादीयुक्त तरकारी रोक्न चालेको कदमको समर्थन गरिनसक्दै पछि हटेको भन्दै आलोचना गरे ।
नेता थापाले भारत जाने चिया र तरकारीको पनि भारतले कडा परीक्षण गरिरहेको ध्नायाकर्षण गराए। ‘हामीले खबरदारी गरिनसक्दै सरकार त पारीको इशारामा गलेछ’, उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँको राष्ट्रवादी खुट्टा त देखिसकिएकै हो । तपाईँको घुँडामा कत्रो भ्वाङ पर्यो? त्यो पनि हामीलाई बताइदिनुस् न।’ त्यस्तै अर्का सांसद गौरीशंक चौधरीले सीमानाकामा विषादी परीक्षण गरेर मात्रै तरकारी ल्याउने निर्णयबाट सरकार पछि हटेको भन्दै दुःख व्यक्त गरे। ‘नेपालीका लागि यो दुभाग्र्य हो। भारतले हाम्रो अदुवा, अलैँची, चिया परीक्षणका नाममा साता दिनसम्म रोकेर मात्रै जान दिन्छ’, उनले भने, ‘परीक्षण नगरी आउन दिनु नागरिकप्रति गम्भीर खेलबाड हो। भारतबाट आउने तरकारीमा ८३ देखि ९० प्रतिशतसम्म विषादी प्रयोग भएकोछ।
‘सरकाले भारत र तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने तरकारीको विषादी परीक्षण थालेपछि केही झण्झटिलो हुँदा हुँदै पनि हामीले समर्थन गर्‍यौँ। तरकारी केही महँगो भए पनि हामी सहन तयार भयौँ’, उनले भने, ‘हाम्रो साथ पाएपछि सरकार आफ्नो निर्णयमा अडिने विश्वास थियो तर पारीबाट आएको सानो धक्काले हल्लिएर पछि हट्यो।’ गगनले सरकारको कदमको समर्थनमा महँगी सहन तयार हुँदा पनि भारतसामू झुकेको उनले बताए।